Depiote Mpanohitra : Manitsakitsaka ny zon’ny mpiasa malagasy -
AccueilSosialyDepiote Mpanohitra : Manitsakitsaka ny zon’ny mpiasa malagasy
Depiote Mpanohitra : Manitsakitsaka ny zon’ny mpiasa malagasy
04/05/2018 admintriatra Sosialy 0
Nifototra tamin’ny fitakiana amin’ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny zon’ny rehetra ny hetsika nataon’ireo solombavambahoaka mpanohitra hatrany am-boalohany raha ny filazan’izy ireo. Mazava anefa izao fa fanitsakitsahana ny lalàna sy ny zon’ireo olom-pirenena no ataon’izy ireo ao anatin’izao fanakorontanana ny firenena izao. Maro be ireo olona na mpiasa mitaraina noho ny tery ataon’ireto solombavambahoaka ireto mandritra ny famoahan’izy ireo ny mpiasam-panjakana. Maro amin’ireto farany mantsy no vonona hanatanteraka ny asany ka tsy te hanaraka izany fitokonana izany. Mazava anefa ny fanambarana nataon’ireto mpanakorontana ireto, fa tsy maintsy mivoaka avokoa ny mpiasa rehetra. Tsy vitan’izay fa hitondran’izy ireo fanalahidy manokana ihany koa ny varavaran’ireny minisitera ireny, ka izay tsy manaiky ny famoahan’izy ireo dia mihidy ao amin’ny orinasa hiasany. Resaka fotsiny araka izany ilay fanambarana fa malalaka amin’izay heveriny fa mety aminy ireny mpiasa ireny, na hanaraka ny fitokonana na tsia. Azo antoka mantsy fa hihanjahanja irery eo ireto solombavambahoaka ireto raha toa ka mamela malalaka ny mpiasam-panjakana amin’izay safidiny manoloana izao fitokonana izao. Taratra izany amin’ny alalan’ny fimenomenoman’ireo mpiasa terena hivoaka.
Fa aiza ho aiza ao anatin’ny asa voafaritra ho an’ny depiote tokoa moa no milaza fa azon’izy ireo atao ny manery ny mpiasa hitokona? Raha ny fantatra mantsy dia ny manao lalàna no asan’izy ireny. Tsy izany anefa no miseho ankehitriny fa lasa manongam-panjakana eny an-dalambe ireto solombavambahoaka ireto, rehefa tsy nazahazaka ny demokrasia tao anatin’ny andrim-panjakana nisy azy. Tokony hieritreritra araka izany izy ireo satria ny mifanohitra amin’izay lazainy avokoa no ataony. Mitaky fahalalahana nefa manao didy jadona. Ny mahagaga, dia tsy mipoitra ireto solombavambahoaka ireto rehefa asaina hiady hevitra, ary hanazava ny tena zava-misy marina nahatonga azy ireo manakorontana ny firenena toa izao. Ohatra tamin’izany ny tsy nahatongavan’ny solontenany teny amin’ny TVM sy ny RNM ny Larobia teo. Izany hoe sady matahotra ady hevitra, no matahotra fifidianana fa dia minia manakorontana ny firenena tsotra izao. Tsy manana ny fahamarinana akory matoa tsy mahasahy milaza izany rehefa omena sehatra hoy ireo tena tia tanidrazana. Tahotra noho izany no tsy nahatongavany tamin’io fotoana io. Nibaribary teo imason’ny vahoaka malagasy mantsy ny lainga nafafy sy ny fanitsakitsahana lalàna natao hatramin’izay raha nandray anjara tamin’ilay adihevitra teo, dia naleon’ireto solombavambahoaka “ho an’ny fanovana” ireto tsy nipoitra.
Nanolotra vahaolana maharitra hanafoanana ny delestazy ny filohan’ny repoblika, tamin’ny kabariny nandritra ny lanonana noho ny asaramanitra teny Iavoloha ny zoma teo. Lehibe indrindra amin’izany ny fampiasana ny angovo azo havaozina. Eo koa ny fanampiana ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : “Ampy tsara ny tahirim-panafody hiadiana amin’ny aretina pesta”